अनौठो संसार | हामी सबैको अनलाईन रेडियो
Thursday, December 14th, 2017 10:45:22 PM
Home अनौठो संसार
चोरले हाम्रा केही चिज चोर्यो भने पिर पर्छ, सातो पुत्लो उड्छ । तर आयरल्याण्डकी लीसा कोएनलाई भने आफ्नो चिज चोरी...
चोरले हाम्रा केही चिज चोर्यो भने पिर पर्छ, सातो पुत्लो उड्छ । तर आयरल्याण्डकी लीसा कोएनलाई भने आफ्नो चिज चोरी हुँदा समेत त्यस्तो कुनै दुख लागेन । उल्टै मज्जा आयो । वास्तवमा चोरले उनको गोजीबा...	Read more
विश्वकै सबैभन्दा सानो आकारको दाबी गरिएको सुनको झण्डाको आकार यति सानो छ की यसलाई तपाइँ सियोको प्वालबाट समेत निकाल्न सक्नुहुन्छ । भारतको राजस्थानस्थित उदयपुरका एक व्यक्तिले सबैभन्दा सानो आकारक...	Read more
एकजना श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई लेखेको चिठीको मूल्य कति होला ? सायद त्यस्तो चिठीको मूल्य श्रीमतीलाई चाहिँ अमूल्य हुनसक्छ अनि अरुलाई अर्थ नहोला । तर, ९८ वर्ष पहिले लेखिएको एउटा चिठी भने लाखौ...	Read more
भारतको मुम्बई सहरमा निलो रंगका कुकुरहरु घुम्न थालेका छन् । नयाँ मुम्बईका घुमन्ते कुकुरहरु एकाएक निलो रङमा बदलिएपछि सबै अचम्ममा परेका छन् । आखिर कुकुरहरु किन निलो भए ? यसको कारण खोजिँदैछ । नय...	Read more
स्वयंबरको औंठीको मूल्य कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा चीनका एक व्यक्तिले पुष्टि गरिदिएका छन् । आफ्नो हराएको इन्गेजमेन्टको औंठी भेटिएको खुसीयालीमा दक्षिण–पश्चिमी चीनको चोंगक्विंगका एक व्यक्तिले ५...	Read more